गण्डकी प्रदेश Archives – Samacharpati
बागलुङ, २२ असार । गलकोट नगरपालिका वडा नं ७ मल्ममा घुम्टे बहुउद्देश्यीय सभा हलको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । मल्म सप्ताहघाटमा निर्माण भइरहेको सभा हलको असार ५ गते गलकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख रेणुका काउचा मगरले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सामाजिक विकास सँग सँगै सभा, सम्मेलन, बैठक, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भेला गर्न सहज होस भन्ने […]
तनहुँ, २२ असार । तनहुँमा हालसम्म ६७ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको आइसोलेशनबाट सोमबार एकैदिन ३२ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएसँगै उक्त सङ्ख्या पुगेको हो । उक्त आइसोलेशनमा बस्दै आएकामध्ये सबैभन्दा बढी ऋषिङ गाउँपालिकाका बासिन्दा १८, म्याग्दे गाउँपालिकाका छ, व्यास नगरपालिकाका पाँच र भानु नगरपालिकाका तीन जना […]
पोखरा, २२ असार । पोखरामा रगतको अभाव देखिएपछि युथ भोलेन्टियर फर चेञ्जको आयोजनामा आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा ४१ युनिट रगत संकलन भएको कार्यक्रम संयोजक सन्तोष पोख्रेलले बताए । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ को वडा कार्यालयको प्रांगणमा सम्पन्न कार्यक्रमा बोल्दै राष्ट्रिय युवा परिषदका सदस्य दीलिप न्यौपानेले युवाहरु सकारात्मक चेतनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा […]
गलकोट, २२ असार । क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका बागलुङको निसीखोला–२ का २९ वर्षीय सुनिल विश्वकर्माको शव ढोरपाटन नगरपालिका–४ स्थित लुकुरवन खोला नजिकै आइतबार राति व्यवस्थापन गरिएको छ । विश्वकर्माको आइतबार बिहान ढोरपाटन नगरपालिका–४ खुङ्गास्थित छोरेगाउँ माविको क्वारेन्टिनमा निधन भएको थियो । यही असार २ गते भारतबाट फर्किएका उनको असार १२ गते स्वाब सङ्कलन गरिएको भए पनि मृत्यु […]
पोखरा, २२ असार । पोखरामा एक जना व्यक्ति झुण्डीएर आत्महत्या गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २९ पट्नेरीमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका १ का २४ वर्षिय विपिन भण्डारी झुण्डीएको अवस्थामा फेला परेको कास्कीका प्रहरी नायव उपरिक्षक एवं कास्की प्रहरीका प्रवक्ता सुवास हमालले जानकारी दिनुभयो । पट्नेरीमा रविन केसीले संचालन गरेको सम्भावना कृषि एवं एग्रो फर्ममा […]
पोखरा, २१ असार । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा लगानी गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेपश्चात आइतबार एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपालमै उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न सके मात्र नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने […]
चुत्र महत, भीरकोट, २१ असार । कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण प्रभावित भीरकोटवासीहरुको लागि राहत होस भनी विभिन्न संघसस्थाहरुले राहत रकम दिने क्रम जारी रहेको छ । चिनको वुहान शहर वाट शुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ विश्वभरी फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यस भाइरसको व्यापक संक्रमण वढेको छ । यस संक्रमण वाट वच्नको लागी […]
बागलुङ, २१ असार । बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ बजारको वडा नम्बर १ र २ मा सञ्चालन गरेको घरघरमा कौसी खेती अभियानअन्र्तगत बागलुङ –१ रामरेखा वडा कार्यालयमार्फत घरमै पुगेर छ प्रकारका तरकारीका बीउ कौसी खेती प्रबर्द्धन गर्नका लागि घरधनीलाई वितरण गर्दै वडाध्यक्ष दुर्गा बोहोरालगायत । तस्वीर : खेमराज गौतम, रासस
काठमाडौँ, २१ असार । बागलुङ क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाका २९ वर्षीय सुनिल विक रहेका छन् । उनको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । केहि दिन अघि मात्रै भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका सुनिलको आज बिहान मृत्यु भएको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख […]
काठमाडौँ, २१ असार । गण्डकी प्रदेशमा आज ३ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको छ । आज एकाबिहानै आएको रिर्पोटमा दुई जिल्लाका तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश क्षयरोग केन्द्र, पोखरामा गरिएको परिक्षणमा गण्डकी प्रदेशका बागलुङमा २ र तनहुँमा एक गरी थप ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनीहरु […]
पोखरा २१ असार । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ गण्डकी मेडिकल कलेज ईकाइ कमिटीको शनिवार सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनले पुनः दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा शकंर पौडेल,उपाध्यक्ष शोकमणी सुबेदी, सचिव राजन पोखरेल,कोषाध्यक्ष अमृत पौडेल रहेका छन् । समितिको सदस्यहरुमा हरि बहादुर बस्नेत, सूर्य बहादुर कार्की,सरस्वती कोइराला,बुद्धि बहादुर थापा,जिवन खड्का,किसान परियार,दिपा […]